Anwụ na-acha Anphitheater na-anabata Breakout Country Star Chris Janson Ọktoba 16, 2021 - pisklak.net
Anwụ na-acha Anphitheater na-anabata Breakout Country Star Chris Janson Ọktoba 16, 2021
Sunset Station na-enwe obi ụtọ ịkpọsa kpakpando mba Chris Janson ga-ama jijiji n’èzí ya Sunset Amphitheater na Satọde, Ọktọba 16, 2021 na 8 pm Tiketi na-amalite na $ 25.00 gbakwunyere ụgwọ bara uru wee gaa ire Friday, July 2 na 10 am
Breakout star star Chris Janson bụ onye na-ere ihe na platinum, onye na-eme ihe nkiri octane, onye na-eme ọtụtụ ihe, na onye na-agụ egwú / onye na-agụ egwú. N’ime afọ ise kemgbe a tọhapụrụ album mbụ ya, onye nnọchi anya CMA oge atọ anakọtara otuto dị mma nke na-etinye ya n’etiti nnukwu egwu egwu obodo. O weghaara trophy maka ACM Video of the Year maka Gold ya bụ nke a kwadoro, abụ na-akpali akpali “Nwa nwanyị Na-arunkụbiga Ahụ Ike,” nke rụkwara aha Song of the Year na 2018 Music Row Awards ma kpọọ ya otu n’ime “Iri I Echere m na Ederede ”site NSAI. Ihe osise ya, Triple-Platinum smash “Buy Me A Boat” nwetara otu nsọpụrụ NSAI, na-eme ka ọ bụrụ otu n’ime ọnụ ọgụgụ ndị ọkachamara kachasị ama nke ụlọ ọrụ ahụ iji nweta aha ọtụtụ ugboro, yana iHeartRadio Music Awards Country Song of Afọ. Janson nwere 4 # 1 hits tinyere multi izu chaatị topper “Emela”, “Ezigbo Vibes”, “Idozi Ihe Ọrinkụ Dụ”, “Zụrụ M Bogbọ mmiri” & onyinye mmeri “Nwa Arunkụrụma”. A na-anụ egwu ya ugbu a, “Waitin ‘On 5,” ugbu a na igwe ikuku. Na mgbakwunye na ihe ịga nke ọma ya, onye na – ede abụ a ma ama nyere pen ya n’aka ndị ọgbọ ụlọ ọrụ gụnyere Tim McGraw (“ruckgbọala Ee,” “Aga m abụ mgbe niile”), LOCASH (“Achọrọ M Ndụ A”) na akụkọ ifo Hank Williams Jr. (“Chineke Fearin ‘Man,” “Thosebọchị ndị ahụ agafeela”) & ọtụtụ ndị ọzọ. Chris bụ Grand Ole Opry so.
Tiketi maka Chris Janson bụ $ 25.00, $ 32.50, $ 37.50, $ 42.50 na $ 57.50 gbakwunyere ụgwọ dị mkpa wee gaa ire na ọha na Fraịde, Julaị 2 na 10 am Ọnụ ụzọ mepere na 7 pm ma bụrụ ihe ngosi nke afọ niile (yana ndị ọbịa 21 + ). Tiketi nwere ike zụrụ na ọ bụla Station cha cha wardsgwọ Ọrụ Center, ma ọ bụ online na stationcasinoslive.com na ticketmaster.com. Maka ozi tupu ire ere, soro @stationcasinos na @sunsetstation na soshal midia.
Echiche Post: 6